Monday March 23, 2020 - 19:13:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka ee ay hoggaamiyaan Farmaajo iyo Kheyre ayaa ku dhawaaqday in aysan ka dhan aheyn qorshaha ay dowladda Xabashida Itoobiya ku doonayso in ay oon iyo gaajo ugu horseeddo malaayiin qof muslimiin Carab ah.
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhax dhaxaad ka tahay arrimaha khilaafka qeybsiga biyaha Wabiga Niil ee udhaxeeya Masar,Suudaan iyo Itoobiya.
Dowladda Farmaajo waxay sheegtay in ay kaalin dhax dhaxaad ah ka qaadanayso khilaafka ku saabsan biya xireenka ay Itoobiya ka dhisayso halka uu kasoo askumo wabiga Niil arrinkaas oo halis weyn ku ah shucuubta ku dhaqan Masar iyo Suudaan.
Mowqifkan ceebta ah ee DF-ka ay ka qaadatay arrintan masiiriga ah ayaa yimid kadib socdaal uu Xasan Cali Kheyre isbuucii lasoo dhaafay ku tagay magaalada Addis Ababa waxaana larumeysanyahay in Itoobiya ay amar kusiisay hoggaanka dowladda in ay bedelaan mowqifkii ay horay ugu taageereen Masar.
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ah midda sida rasmiga ah ukala rogrogta siyaasadda ay ku shaqeeyaan madaxda xukuumadda Villa Somalia, kumanaan askar Xabashi Itoobiyaan ah ayaa xoog ku jooga dalka Soomaaliya iyadoona Addis Ababa ay ku adeeganayso dabadhilifyadeeda dalka iyadoo boobaysa kheyraadka ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed.